संघीय सरकारः कुन क्षेत्रलाई कति बजेट ? – Online Jagaran
संघीय सरकारः कुन क्षेत्रलाई कति बजेट ?
१५ जेष्ठ २०७५, मंगलवार १४:०९ May 29, 2018 जागरण
काठमाण्डौं, १५ जेठ (जागरण) । सरकाररले अर्थिक वर्ष २०७५/ ७६ का लागि नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्दै बजेटको आकार १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडको बजेट ल्याउनुभएको हो ।
खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्दै राजस्वबाट ८ खर्ब उठाउने लक्ष्य लिएका छन्। त्यस्तै वैदेशिक ऋण २ खर्ब २ अर्ब लिइने खतिवडाले बताउनुभयो ।
बजेटका मुख्यमुख्य अंशहरु
आगामी आर्थिक वर्षमा मेची – महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको काँकडभिट्टा–बर्दिबास, बुटवल–गड्डाचौकी र मेची–महाकाली–काठमाडौं लिंकमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर तयार गर्ने । वीरगञ्ज–काठमाडौं, बर्दिबास–सिमरा र रसुवागडी–काठमाडौं–पोखरा रेलमार्ग निर्माणको डीपीआर तयार गरी निर्माण काम सुरु गर्ने ।
कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा जलमार्ग यातायात सञ्चालनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
केन्द्र सरकारको बजेटः १३ खर्ब, १५ अर्ब १६ करोड
कर्णालीका सबै पालिकामा निःशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर
१० कार्तिक २०७८, बुधबार ११:५२ October 27, 2021 जागरण
अत्याधुनिक व्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण हुँदै
५ चैत्र २०७४, सोमबार ०१:१५ March 19, 2018 जागरण